China Umenzi weRemover Remover kunye noMthengisi | BGT
Ukususa ivumba yindlela entsha yokuhambisa deodorant enokuthi isuse ngokupheleleyo kwaye ifunxe ivumba le-CO2, i-SO2, i-nitrogen oxide exhaust gas (NOX), ammonia (NH3) njl.
Ingasetyenziswa kwi-PP, PE, PVC, ABS, PS, Paint kunye neRubber.
Ukususa ivumbaluhlobo lokuhambisa deodorant ngendlela yokufunxa kunye nokuphendula kunye nokusasazeka okuhle. Xa kuthelekiswa nezinye iindlela zokuhambisa deodorant, inokuphelisa ngokupheleleyo ivumba lepeyinti kunye ne-PP, i-PE, i-PVC, i-ABS, iplastiki ye-PS, irabha, endaweni yokusebenzisa amanye amavumba ukugubungela.
Inokufakwa okunamandla kwe-CO2, i-SO2, i-nitrogen oxide exhaust gas (NOX), ammonia (NH3) iibhotile zezibulali zinambuzane, iibhotile zezithambiso, iibhotile zesiselo, izongezo zemichiza, ivumba lentsalela, kodwa ivumba lokuqala leplastikhi, irabha, ipeyinti, inki, ipeyinti ayizukutshintsha.
Zonke iindidi zokulandelayo azinavumba nge-non-toxic kunye ne-non-stimulation eye yadlula iSatifikethi se-SGS.
Okulandelayo kukwaziswa okucacileyo kohlobo ngalunye:
Yenziwe ngamachiza amaminerali kunye nendlela ephambili yokufunxa. Luhlobo oluqhelekileyo lokusetyenziswa kwesiqhelo kwiplastikhi ngevumba elincinci.
PP, PE, iHDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, izihlangu izinto, irabha, ipeyinti, inki, ipeyinti njl
0.1% - 0.3% yeplastiki, i-0.8% -1% yezixhobo zerabha.
Inomsebenzi ofanayo neBT-100A, kodwa idosi incinci.
0.05% - 0.1% yeplastiki
Inomsebenzi ofanayo neBT-100A wokususa ivumba elinamandla.
Kulungile nakwisicelo sePVC esithambileyo.
I-0.1% - 0.2%, ihlala isongeza kuphela i-0.1% kuthi ngokwaneleyo.
Kukwamkela itekhnoloji ephezulu yokutsalwa kwengcambu ye-meridian ngendlela ebhetele yokubola.
Isetyenziswe ngcono kwi-PP, PE kunye ne-PVC ethambileyo.
Ilungiselelwe ngokukodwa ukuqhubekeka ngegwebu kweplastikhi.
Ingasetyenziswa amagwebu PP, PE, PVC, PS, ABS, EVA kunye irabha.
Isetyenziswa ikakhulu kwimveliso yezihlangu.
Ingasetyenziswa kwi-PP, i-PVC, i-PS, i-ABS kunye ne-PC njl.
Ihlala isetyenziswa kwimpahla yerabha.
PP, PE, PVC, PS, PA, ABS kunye nezihlangu eziphathekayo.
Inokuphelisa ivumba elivela kwiplastikhi ngokugcwaliswa kweFrench emhlophe kunye necalcium carbonate.
PP, PE, PVC, ABS, PS kunye irabha.
Isusa ivumba yifomu yomgubo kwaye i-15KG ipakishwe kwikhatoni enye kunye nokupakishwa kwealuminium ngaphakathi. Kufuneka igcinwe kwindawo ecocekileyo, engenisa umoya, eyomileyo kunye nexesha lokugcina iinyanga ezili-12.
1.The abathengi kufuneka ukhethe uhlobo ngokungqinelana ubungakanani ivumba umbandela.
2.Sinokuphelisa elinye ivumba elingakhankanyi kule khathalogu, ukuba awukwazi ukugweba ukuba yintoni ivumba, uthumela nje isampulu encinci kuthi, sinokwenza uvavanyo kwilebhu yethu kwaye sikuncede wenze isigqibo sokuba loluphi uhlobo inokusetyenziswa.
Njengoko ivumba lemichiza kunzima kakhulu ukugweba ukuba livela phi, ke sicela ukuba uthumele isampulu kuthi kuvavanyo lwelebhu, ukuze sikwazi ukwenza uhlobo olufanelekileyo isicelo sakho.
Egqithileyo Ukucacisa iAgent BT-9803
Okulandelayo: Ukukhanya kwe-Brightener OB-1
Ukususa ivumba lokususa ivumba
Ukususa ivumba elibi
Isiphunga sokususa iPlastiki
Ukususa ivumba le-PE
Ukususa ivumba lePP
Ukususa ivumba lePV
Isiphunga sokususa irabha